ကွှကျသိုးတို့အိမျ - Owl Myanmar News
သူငယျခငျြးနာမညျကကွှကျသိုး ငယျငယျကတညျးကဆော့ဖျောဆော့ဖကျ ဒီကောငျက၇တနျးလောကျမှာကြောငျးထှကျသှားတယျ အပွငျလောကအကွောငျးနောကွတေယျ ဒီကောငျ့ကွောငျ့ပဲဂှငျးထုတတျလာတာ နှာကိစ်စကတော့ စကားပွောတိုငျးပါတယျ သူ့အမလငျမယားလိုးတာပါ ခွောငျးပွီးထုတဲ့ကောငျ သူ့အမအကွီးဆုံး လငျနှဈယောကျယူထားတယျ ခွံဝိုငျးထဲမှာပဲ အိမျဆောကျနတေယျ ပထမယောကငြ်္ားသပွေီးတော့ ဒုတိယအိမျထောငျထူတယျပေါ့ ဖငျအငွိမျဆုံးပေါ့ ကနြျောတို့ကမကွီးမခိုငျလို့ချေါကွတယျ သူ့အောကျကတော့ တငျမာဝငျး သူကတော့ ၂လငျကှာ ခလေးတဈယောကျအမေ ကွားထဲမှာ အပြျောကုံးတဲ့လငျတှကေလညျးမနညျးလှ ကွှကျသိုးအထကျက အဈကိုကအရကျသမား စိတျကောငျးရှိတယျ အငယျဆုံးကောငျမလေးကလညျး အပြိုဖွနျးဆတျစလူးထနပွေီ
ကွှကျသိုးက ကနြေျာ့အပျေါသဘောအတျောကောငျးတဲ့ကောငျသူမိနျးမယူပွီးတော့တောငျ သူ့မိနျးမကိုလေးဘကျထောကျခိုငျးထားပွီး ကနြေျာ့ကို တံခါးအကှယျကနခေျေါထုတျပွီး သူ့မိနျးမစောကျပတျကို ပွတယျ သူ့မိနျးမက မသိရှာ နျောလညျးလကျနဲ့ထိကိုငျကွညျ့မိတယျ
မိနျးမယူထားပမေဲ့ကနြျောနဲ့အတှဲမပွတျ သူတို့တဈအိမျလုံးက ကနြျောနဲ့ကွှကျသိုးကို လငျမယားလို့ချေါကွတယျ ကွှကျသိုးက ကနြေျာ့ကို ပွောဖူးတယျ ငဇျောမငျးကိုစိတျခတြာတဈခုရှိတယျ မငျးမှာကွာကူလီစိတျမရှိတာပဲ ငါကတော့ ရလို့ကတော့အကုနျလိုးမှာ ဒါ့ကွောငျ့လဲ ကွှကျသိုးကကနြေျာ့ကို စိတျခတြာ ကွှကျသိုးက သူ့အမမေုဆိုးမဒျေါမွငျ့နဲ့စီးပှားမခှဲ ကုနျကူးတဲ့အလုပျကိုလုပျရတယျ
အိမျထောငျဦးစီးပေါ့ ရထားနဲ့ကုနျကူးတယျ ဈေးမှာသူ့အမဒေျေါမွငျ့က ရောငျးတယျ အပြိုပေါကျမ စန်ဒာရယျ ကွှကျသိုးရယျ အရကျသမားရယျက ကူလုပျရတယျ ကွှကျသိုးအမကေ လူကွားထဲတောငျ အတျောနောကျတာ လူပြိုကွီးဂှေးကွညျ့ခွငျလို့ဆိုပွီး ပုဆိုးဆှဲခြှတျတာ အဲ့လိုနောကျတာကို မိသားစုစုံတိုငျးလုပျလရှေိ့တယျ ကနြျောကရှကျပွီး ပွေးရငျ ဝိုငျးရီကွတာ ဓလလေို့ဖွဈနပွေီ
ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ အမွဲစိတျပါဖီးလာတာက တငျမာဝငျး သူတို့ခွံဝငျးထဲ လူရှငျးတဲ့ရကျဆို ကနြျောတငျမာဝငျးကို ကွံဖို့ခြောငျးတယျ ဒါပမေဲ့မရဲပါဘူး တငျမာဝငျးကလညျး တဈလတဈခေါကျတော့ ကုနျကူးတယျ သူ့စီးပှားနဲ့သူ တဈရကျနလေ့ညျပိုငျး လူရှငျးတော့ တငျမာဝငျး ကိုတှလေို့တှညေ့ားသှားခြောငျးတယျ ကွှကျသိုးအိမျအောကျကနကွေညျ့နတေုနျး ဒျေါမွငျ့က သူ့အိမျမကွီးကနေ ဟဲ့ငဇျော ကွှကျသိုးညက ခရီးထှကျသှားတယျ လနေငျမသိဘူးလားလို့ရုတျတရကျလှမျးအျောတော့ လနျ့တောငျသှားသေး ဒျေါမွငျ့က ဈေးရောငျးလို့လားမသိ အသံကတော့ အျောကယျြ အျောကယျြ ဟဲ့ကောငျလေးလာစမျး ငါ့ကိုလာကူစမျးဆိုတော့ ကနြျောလညျး အိမျမကွီးပျေါတကျသှားတယျ ဒျေါမွငျ့မကျြနှာက မကွညျမသာ အဒျေါနမေကောငျးလို့လားဆိုတော့ အေးဟယျ ဟိုဟာတှစေိတျမခပြမေဲ့ မတတျနိုငျဘူးလာပွနျနားရတာပဲ တံခါးမကွီးပိတျထားလိုကျငဇျော ကွကျတှခှေေးတှတေကျလို့တဲ့ ခနျးစညျးခထြားတဲ့အခနျးထဲကို ရှကေ့ ဝငျသှားပွီး လိုကျခဲ့တဲ့ ကုတငျပျေါခွဆေငျးထိုငျခလြိုကျတယျ အဒျေါကနြျောဘာလုပျပေးရမလဲဆိုတော့ ငါ့ကိုဇကျကွောဆှဲနှိပျပေးစမျးဘာဟယျ အကွောတှတေကျနတေယျ ဆေးသောကျတာလညျးမရဘူးဟယျ
ကနြျောလညျးဇကျကွောဆှဲဂုတျပိုးသားတှေ နှိပျပေးတယျ ဆှဲကွိုးအတုတျကွီးက ဆှဲထားသေး ဆှဲကွိုးက ခံနတေော့ ဆှဲကွိုးခွှတျခိုငျးတယျ ဒျေါမွငျ့နှိပျခိုငျးသမြှနှိပျပေးရတယျ ပေါငျတှငျးကွောတှကေို နှိပျခိုငျးပွနျတယျ ပေါငျတှငျးကွောတှကေို ထမိနျအောကျထဲလကျဝငျခိုငျးပွီး နှိပျခိုငျးတော့ ဒျေါမွငျ့ရဲ့အဖုတျမညျးကွီးက ပျေါနတေယျ ကနြျောလညျးအဲ့ကမြှ မရိုးမသားစိတျတှဖွေဈလာတာပဲ ဒျေါမွငျ့က ပေါငျခွံလေးကို နှိပျစမျးပါခလေးရယျ ဆိုပွနျတော့ စောကျဖုတျက တငျကွီးမွငျနရေတယျ အသကျ၅၀ကြျောပမေဲ့ လူကပိနျတယျဆိုပမေဲ့ဒျေါမွငျ့က အတှငျးပိုငျးအသားအရညျ ပြော့တှဲမနဘေဲ ကဈြလဈြနတေယျ ကနြေျာ့ကို ဆီးခုံအပျေါကိုလညျးနှိပျခိုငျးတယျ ထမိနျကို မပျေါပျေါအောငျနှိပျခိုငျးနမှေနျးသတိထားမိလာတယျ ကနြေျာ့ပေါငျကိုလညျး ပွနျပှတျပေးနတေော့ စိတျကထလာပွီး ငပဲက ထလာတယျ ထမိနျပျေါရကျနဲ့ကိုထထိုငျပွီး ကနြော့ကို ခွဆေငျးထိုငျခိုငျးပွီးသူကလညျးကနြေျာ့ခွထေောကျပျေါသူ့ခွဆေငျးထိုငျလို့ မကျြနှာခွငျးဆိုငျ ဇကျကွောကိုနှိပျခိုငျးတယျ
နှိပျနရေငျးက ကနြေျာ့ပေါငျပျေါလကျရောကျလာတယျ ပွီးတော့ ကနြေျာ့ငပဲကို ကုဆိုးပျေါက ကိုငျလိုကျတယျ ပါးစပျကလညျး ဒီတခါတော့ မိပွီ လို့ပွောတယျ ပုဆိုးလှနျပွီး လီးကို ကိုငျဆှတော့ ကနြျောမနနေိုငျတော့ဘူးအဒျေါကနြျောမရတော့ဘူး လှတျပါတော့ဆိုလညျးမရဘူး အဒျေါလရညျတှထှေကျကုနျလိမျ့မယျဆိုတော့ သူ့စောကျဖုတျကွီးကို ပေါငျကားပေးတယျ ကနြျောလညျး အံ့အားသငျ့နတေယျ ဘာလုပျနလေဲဒီထဲပနျးထညျ့တဲ့ တကယျ့တကယျလုပျတော့ အပေါကျကမတညျ့ အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ဒျေါမွငျ့ကကိုငျပွီး တပေ့ေးရတယျ တခါတညျးဒျေါမွငျ့စောကျဖုတျထဲလီးဝငျသှားတာနဲ့အားရှိသမြှလိုးပဈတယျ လရညျကမကွာဘူးထှကျ သှားတယျ… ဒါပမေဲ့ဆကျလိုးခွငျနတောနဲ့လိုးနလေိုကျတယျ ဒျေါမွငျ့ကအပေးကောငျးတော့ကွာလညျးကွာ ကောငျး လညျးကောငျးဒျေါမွငျ့လညျး ပွီးသှားတယျ ကနြျောလီးကို သုတျပေးပွီး ပါးစပျလုံပစနေျော
ထပျလုပျခွငျရငျတဲ့….. ဒျေါမွငျ့နှငျ့မထငျမှတျဘဲစားလိုကျရတာဟာ ကနြျောရဲ့ပှဲဦးထှကျကံကောငျးမှုဆိုတာနောကျပိုငျးနှဈကာလတှအေတျောကွာမှ သုံးသပျသိရှိရပါ စိတျလကျကွညျလငျပေါ့ပါးပွီး ကွှကျသားတှလေညျးပြော့ပြောငျးလို့နတေယျ လူဟာ ငါစားဖူးပွီဆိုတဲ့ ဘဝငျလေးလညျးဖွဈနတေယျ ကွှကျသိုးကလညျးပွနျမရောကျသေးတော့ တိုငျပငျဖျောမရှိ ဒျေါမွငျ့နဲ့နလေ့ညျဖကျဆုံရမလား ဈေးဆိုငျဖကျလမျးကွုံသလိုနဲ့ဝငျပမေဲ့ ဒျေါမွငျ့ကတော့ စကားလမျးကွောငျးလညျး ဘာမှမဖွဈသလိုနဲ့ နောကျတဈခုက ခပျတညျတညျခပျတနျးတနျးဖွဈနသေလိုပဲ အရူးအမဲသားကွှေးတယျဆိုတာဒါမြိုးဖွဈမှာ ဒျေါမွငျ့ကို အရငျက ဂှငျးမှနျးထုတဲ့အထဲတောငျမထညျ့ တငျမာဝငျးကသာထိပျဆုံး အခုတော့ ဂှငျးထုရတဲ့အရသာတောငျမကွိုကျတော့ တငျမာဝငျးကိုတောငျသှားခွောငျးဖို့စိတျမလာတော့ ဒျေါမွငျ့ဈေးဆိုငျမလာဘူးဆိုတဲ့နကေ့ နောကျဆုံးအကွိမျကွိုးစားခွငျးပါပဲ အခွအေနအေခြိနျအခါပေးပါလကျြ ဒျေါမွငျ့ရယျ သူရယျ ခွံဝငျးထဲမှာ ၂ယောကျတညျး ဒီထကျအခွအေနအေခြိနျအခါပေးတာမရှိ ကွှကျသိုးပွနျမရောကျသေးဘူးငဇျောရေ တဲ့ လှကေားအတိုငျးအိမျပျေါတကျတော့တံခါး ပိတျထားတယျ တံခါးခေါကျပမေဲ့တံခါးထမဖှငျ့ပေး ဒါတောငျဆယျမိနဈလောကျစောငျ့သေးတယျ စိတျထဲမှာရှကျတာရယျ မခံခွငျစိတျဖွဈသှားတာရယျက ကနြေျာ့ကို လမျးကွောငျးပွောငျးသှားစတေယျ အားကစားရုံမှာ ဝိတျသှားမတယျ အပွေးလကေ့ငျြ့တယျ ကွိုးခုနျတယျ ဒျေါမွငျ့အာရုံထဲက ထှကျဖို့အားကစားနဲ့ အာရုံပွောငျးလိုကျတယျ သိပျတော့မလှယျကူလှ ကွှကျသိုးကနြေျာ့အိမျလာသေးတယျလို့ပွောတယျ မဆုံဖွဈတာ မသှားဖွဈတာ ၃လနီးပါးရှိသှားတယျ
ဂှငျးမတိုကျ ဖာမခတြော့ အသားအရညျကဈြလဈြပွီး လူဟာလနျးဆနျးလို့နတေယျ အားအငျကအပွညျ့ ၆လတခေါကျမှ အိမျပွနျရောကျတဲ့အဖတေောငျကနြေျာ့ကို အတျောအံ့သွခြီးကြူးနတေယျ သုံးဖို့စှဲဖို့လညျးအတျောမြားမြားအမတေို့မသိအောငျပေးသှားသေးတယျ ကနြျောအရငျကဖွဈသလိုဝတျစားတာတှေ နထေိုငျမှုတှကေအစပွငျပလိုကျတယျ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးသပျခကျခကျ လူကွီးဆနျတဲ့အဝတျအစားကိုပဲဝတျဖွဈတော့တယျ တောကျပဈေးကွီးတာမြိုးတော့မဝတျ နောကျပိုငျးမှသိလာတာက ဂှငျးမထု ဖာမခဘြဲ အားကစားပုံမှနျလုပျတဲ့အကြိုးဟာ ကနြေျာ့ကို အတျောအကြိုးရှိတာပါပဲ ယုံမလားမသိ မိနျးမတှပြေိုပြိုအိုအို လိငျတိမျးညှတျမှုရှိလာတာပဲ ကွှကျသိုးအိမျကိုခဏခဏလာတာအားနာစရာကောငျးတယျ သူ့အိမျသှားလိုကျပါအုံးအမကေပွောတာနဲ့ညဘကျထှကျသှားလိုကျတယျ ဒျေါမွငျ့ ကွှကျသိုးတိုမိသားစုအစုံအလငျ ထမငျးစားနတောနဲ့ကွုံတယျ ကနြေျာ့ကို တံအံ့တသွကွညျ့နကွေတယျ ထမငျးစားပွီးတော့ကွှကျသိုးတို့အိမျဘကျသှားကွ သူငယျခငျြး၂ယောကျစကားတှဖေောငျဖှဲ့ကွပေါ့ နှာအကွောငျးမမေးတော့လို့ကွှကျသိုး
အံ့သွနတေယျ အိမျပွနျတော့ အပွငျသှားမလို့လုပျနတေဲ့ တငျမာဝငျးက အဖျောလိုကျပေးပါအုံးဆိုပွီး လကျကိုအတငျးဆှဲတယျ လမျးထဲမှာမှောငျနတေော့ တငျမာဝငျးက ကိုယျခငျြးထိပွီး လြှောကျနတေယျ အမတေို့ ကွှကျသိုးတို့အိမျပဲ နငျကလာတာ ငါ့အိမျကိုလာလညျပါအုံးဟယျ ငါကအိမျမှာ အမွဲတမျးရှိတယျ လာခဲ့နျောတဲ့ စုပျရောလာဒျရောပှငျ့တယျဆိုတာ မကွာခငျရကျပိုငျးအတှငျးသိရတော့တာပါပဲ ။
အရငျကအဖတျတောငျမလုပျခဲ့တဲ့၂လငျကှာခလေးတဈယောကျအမတေငျမာဝငျးကိုယျလုံးခွငျးလာထိပွီးဖိတျချေါနပွေီ ကနြေျာ့အနနေဲ့တိုးတကျမှုကိုမွှငျ့သထကျ မွငျ့စခေငျြတာကတဈဖကျ တငျမာဝငျးရဲ့ အရပျပုပု ကိုယျလုံးကိုယျထညျလှလှနဲ့ ကွာမကျြလုံးကွာနုတျခမျးတှဆေီက ချေါသံကိုပွနျထူးခွငျတဲ့စိတျကလေးကလညျးရှိနပွေနျတယျ မနကျဈေးခေါငျးကှဲတဲ့အခြိနျမှာကွှကျသိုးကနြေျာ့ကိုလိုကျရှာနတေယျဆိုတဲ့သတငျးကကနြျောထိုငျနကွေလကျဖကျရညျဆိုငျဆီရောကျလာ ခဲ့တယျ ဒီသတငျးနဲ့အတူမကွာတဲ့အခြိနျမှာ ကွှကျသိုးလကျဖကျရညျဆိုငျထဲ ရောကျလာပွီး သယျရငျးမငျးကိုအမကေအရေးကွီးတိုငျပငျစရာရှိလို့ ငါ့ကိုလာရှာခိုငျးတယျ သှားရအောငျ တဲ့ ဒျေါမွငျ့ကအိမျအပျေါထကျကဆကျတီစားပှဲခုံမှာ ဆေးပေါ့လိပျဖှါရငျးစောငျ့နတေယျ ကွှကျသိုးကတော့ ကနြေျာ့ကိုထားပွီး သူ့အိမျဘကျထှကျသှားတယျ အရေးကွီးတယျဆိုလို့အဒျေါ ကနြျောစကားစပွီးထိုငျတော့ သိပျတော့လညျးအရေးကွီးတယျရယျမဟုတျပါဘူး ဆိုပွီး ကိစ်စကိုရှငျးတယျ ဒီလိုပါ ဒျေါမွငျ့က၂လုံးထီစာအုပျတှကေိုဆှဲစားခွငျတယျ သူတဈယောကျတညျးမနိုငျဘူး ကနြျောကပိုကျဆံတတျနိုငျမှနျးသိလို့ ရှယျယာတဈဝကျပါနိုငျသလား နာမညျခံပေးမှာက ဒျေါမွငျ့ စာအုပျတှကေို မိသားစုထဲကတဈယောကျယောကျကိုသိမျးခိုငျးမယျ ခွံဝငျးတံခါးပိတျ အိမျတံခါးပိတျပွီးစာအုပျတှကေိုစဈ အလြျောအစားလုပျရုံ အန်တရယျဖမျးရယျဆီးရယျဆိုရငျ စာအုပျတှမေီးရှို့အလှယျတကူလကျစဖြောကျဖို့လညျးလှယျတယျ
ပွေးပေါကျလညျးရှိတယျ ကနြျောလညျးအလုပျမရှိတာနဲ့စာရငျမဆိုးပါဘူးပေါ့ ခေါငျးငွိမျ့လိုကျတယျ အိမျကလညျးဘာမှမပွောပါဘူးကနြေျာ့သဘော အလုပျစလုပျခါစက မကြှမျးသေးတော့ စာရငျးတှစောအုပျတှအေလြျောအစား ငှကေအစ စိစဈရတော့ ညနစေောငျးမှောခါနီးမှသကျပွငျးခနြိုငျတယျ ဒျေါမွငျ့ကတော့ ကနြျောနဲ့ကံစပျတယျခညျြးပွောနတေော့တာပဲ…. အလုပျသဘောလညျးကြှမျးသှားပွီ အကြိုးအမွတျကလညျးအတျောရတယျဆိုရမယျ ဒျေါမွငျ့ကဆိုငျကယျတဈစီးဝယျပွီး စာအုပျသိမျးဖို့လုပျတယျ အဲဒိမှာတငျမာဝငျးက သူစာအုပျသိမျးပေးမယျ အားအားနခေလေးမုနျ့ဖိုးရတယျလုပျမယျဆိုပွီးဇာတျလမျးထဲဝငျလာတယျ ဒျေါမွငျ့လညျးဈေးဆိုငျခငျးဈေးရောငျးအလုပျတှမေလုပျရတော့ဘဲ အိမျမှာအဆီအစိမျ့စားနရေလို့လားမသိ ပိနျခွောကျကပျကနေ အသားရညျပွညျ့ပွီး ဆူဖွိုးလာ အသားဖွူလာတယျ ၂ထပျသဈသားအိမျကိုမွှငျ့ပွီးအိမျအောကျထပျကို အုတျပတျကားလုပျတယျ အခနျးဖှဲ့ပွီး အိမျကိုလုံခွုံလှပအောငျပွငျနိုငျတဲ့အထိဖွဈလာတယျ ကနြျောကတော့ ကနြေျာ့အကြိုးအမွတျဝစေုကို အမနေ့ာမညျနဲ့ဘဏျထဲကိုထညျ့ခိုငျးထားတယျ သူငယျခငျြးကွှကျသိုးကိုအရငျးတောငျ့အောငျ ပိုကျဆံထောကျပံ့ပေးတယျ ကနြျောသတိထားမိနတောကွာပွီအရငျကတော့အလုပျဇောနဲ့သတိမပွုမိ ဒျေါမွငျ့ကစာရငျးလုပျရငျလညျးကနြျောနဲ့ပူးပူးကပျကပျထိုငျတယျ လကျကိုငျလိုကျပေါငျပှတျလိုကျနဲ့ အပွငျကလူရိပျလူသံကွားမှ ထပွီး လူလာရငျတံခါးဖှငျ့မကျြနှာခွငျးဆိုငျမှာထိုငျတယျ ကနြျောလညျးသှေးနဲ့ကိုယျသားနဲ့ကိုယျ တငျသားရငျသားငှါးစှငျ့ ရဆေငျးငါးကွီးလိုဖွဈလာတဲ့ဒျေါမွငျ့ရဲ့အထိအတှကေို့သာယာမိတာအမှနျပဲ ဒါပမေဲ့ဟနျဆောငျထားရတယျ စကားနဲ့လညျးမွူဆှယျတာပဲ ယောကျြားမရှိတာကွာတော့ယောကျြားရဲ့အပွုအစုအယုအယလေးတော့လိုခွငျသား တခါတလဆေို သားအိမျကတောငျ ယားကြိကြိဖွဈတယျဆိုပွီး အခွားအကွောငျးပွောရငျးကလမျးကွောငျးပွောငျးလာတယျ ဖုနျးနဲ့အလုပျရလာတော့ တငျမာဝငျးက ဖုနျးနဲ့စာရငျးအနှဈခြုပျလှမျးတငျတယျ အဲဒိရကျက ၂လုံးထီထှကျမဲ့ရကျကိုမထှကျဘူး ဒီတော့ တံခါးတှပေိတျထားတဲ့အိမျထဲမှာ ပူလောငျအိုကျစကျနတေယျ တံခါးကလညျးအမွဲပိတျနကွေ ထဖှငျ့လို့မရ ဒျေါမွငျ့ကတော့ရှငျးတယျ သူ့အတှကျအခှငျ့ကောငျးဆိုတော့ အိုကျလိုကျတာဟယျ ဆိုပွီး ဗလာစီယာနဲ့ယကျခပျနတေယျ ထမိနျကိုလညျးပေါငျသားတှပေျေါအောငျလုပျနတေယျ အိမျခေါငျမိုးသှပျပွားပျေါမိုးသီးမိုးပေါကျတှရှောခလြာတော့ ငဇျောရေ အိမျအပျေါထပျတံခါးတှမေပိတျထားဖူးလားမသိဘူး မိုးပကျထညျ့ကုနျမယျ လာကူအုံးဆိုပွီး လှကေားပျေါဦးဆောငျတကျသှားတယျ အောကျကနဖေငျလုံးကွီးတှကေို ကွညျ့ရငျးတကျနရေတော့ စိတျကမရိုးမရှ အရငျကဒျေါမွငျ့နတေဲ့အခနျးထဲဝငျသှားတယျ ဒီတံခါးက အားနဲ့ဆှဲမှရမယျလာပါအုံး နငျ့အားသနျသနျနဲ့လို့ချေါတယျ တံခါးကကွပျတာတော့မှနျတယျ မိုးလညျးလုံပါတယျ တံခါးကိုအားနဲ့ဆှဲနတေဲ့ကနြေျာ့ခါးကိုနောကျကနေ ဒျေါမွငျ့ကိုငျထားတယျ ရလားကှယျ့ ရလားကှယျ့ ပွောပွီး ကနြေျာ့ခါးကို ဖကျပွီးကနြျောနဲ့အတူကူဆှဲတယျပေါ့ တကယျတော့အဲဒိတံခါးအဲ့လိုဖွဈနတောကနြျောလညျးသိ ဒျေါမွငျ့လညျးအသိ နို့နဲ့နောကျကနပှေတျနတောကအားပိုပါနသေလိုပဲ ဆငျနဲ့ဆှဲတာတောငျမရ အခနျးကမှောငျနတေယျ မရဘူးအဒျေါ ကနြျောနောကျပွနျလှညျ့တဲ့အထိ မခှါ ဒျေါမွငျ့ပုခုံးကို ကိုငျပွီးကနြျောလညျး စဉျးစားနမေိတယျ လုပျသငျ့မလုပျသငျ့ အဖှားကွီးလကျက ကြောတှကေိုပှတျနပွေီ
မကျြနှာကိုမော့ပွီးထိုးပေးနတေယျ ကနြျောမလုပျခွငျဘူးလို့စိတျထဲကပွောနမေိတယျ ပုခုံးပျေါကလကျကို ဖယျပွီးငွငျးမလို့ လကျနှဈဖကျက ဒျေါမွငျ့ဖငျသားဆိုငျပျေါရောကျတဲ့အခါမှာတော့ လြှပျစဈအမဓါတျကစီးဝငျလာနတေော့တယျ ဖငျတှကေို ဆုပျကိုငျပှတျပေးနမေိတယျ စောစောကမော့ပေးနတေုနျးကတော့ဖီးမလာ အခုတော့ဒျေါမွငျ့မကျြနှာကို ဆှဲယူပွီး နုတျခမျးစုပျနမေိတယျ
ဒျေါမွငျ့ကလညျးခသေူမဟုတျ ပွနျစုပျတယျ သူစုပျရငျ ကိုယျကနား သူနားရငျကိုယျကစုပျနဲ့အပေးအယူမြှနတေယျ လြှာခွငျးထိရငျးစုပျနမျးတဲ့အခါ ကနြေျာ့ထိနျးခြုပျသမြှဟာပှငျ့ထှကျသှားတော့တယျ ကုတငျပျေါဒျေါမွငျ့ကို ပဈတငျပွီးရမကျကွမျးတှနေမျးမိတယျ နို့တှကေိုလညျး ခပျကွမျးကွမျးညှဈခွရေငျး စောကျဖုတျကိုလညျး လကျနဲ့ပှတျနမေိတယျ ဘဝမှာရှဲစိုနသေောစောကျဖုတျကိုပထမဆုံးကိုငျဖူးတာပဲ ဘယျတုနျးကထမိနျခြှတျထားလညျးမသိ ကနြျောပုဆိုးလှနျပွီးစောကျဖုတျနဲ့လီးကို ပှတျတော့ တဟငျးဟငျး ငွီးရှာတယျ ငဇျော မောငျလေး လိုးတော့ကှယျ ထညျ့ပါတော့တဲ့
လီးကို စောကျဖုတျထဲခပျကွမျးကွမျးထိုးသှငျးတော့ အား အမလေး လို့အျောတယျ ခုတငျစောငျးတငျပွီး ခပျကွောငျးညှောငျ့ပေးတော့ လကျတှကေ ကနြေျာ့လကျနှဈဖကျကို ကိုငျထားတယျ ခပျကွမျးကွမျးကို လိုးပဈခွငျစိတျက ကနြေျာ့ကိုကစားခဲ့တဲ့ဒျေါမွငျ့ဒီတခါတော့ နငျ့အလှညျ့ပဲတှကွေ့သေးတာပေါ့ဆိုတဲ့ ကွိမျးဝါးခဲ့မှုကိုသတိရမိတယျ
မိုးသံလသေံကွားမှာ ကုတငျတိုငျတှကေ ပဉျြနံရံတှကေိုသှားဆောငျ့နတော တဒိုငျးဒိုငျး ဒျေါမွငျ့ အားအားအား အမလေး အျောသံကလညျး ညံလို့ ဖငျသားတှအေိကသြှားအောငျဖိလိုးလိုကျ ပုခုံးပျေါတငျထားတဲ့ခွနှေဈဖကျကို အမြိုးမြိုးဖွဲလိုကျစုလိုကျနဲ့လိုးပဈနလေိုကျတယျ ကနြျောနှဈခြီလောကျပွီးနပွေီ ဒါပမေဲ့မရပျဘူး လီးနဲ့စောကျဖုတျတပျလကျြ ကနြော့ကိုခှဖကျခိုငျးပွီး အောကျထပျကို မခြီလာ အောကျထပျက ကွမျးခငျးမှာလညျးထပျလိုးလိုကျတယျ အဖှားကွီးကို အငွိုးနဲ့ကွောကျသှားအောငျလိုးပဈနပေမေဲ့ ပွနျရတဲ့ရလာဒျက ပွောငျးပွနျ ဒျေါမွငျ့ကနြေျာ့ကိုသိသိသာသာဖကျလာတယျ ခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့နတေယျ ကနြေျာ့ခါးကို ခွကေငျြးလိမျပွီးအတငျးဖိကပျထားနတေော့ တယျငိုသံလိုလို ရီသံလိုလို အျောညဉျးပွီး တုနျတကျပွီးငွိမျသှားတော့တယျ အတျောကွာမှ ကိုဇျော ဆိုပွီးကနြေျာ့ကိုနမျးတယျ ကနြေျာ့လီးကအတောငျမကြ ဒျေါမွငျ့ကိုထထိုငျခိုငျးပွီး ကနြျောလညျးခေါငျးကို ဆံပငျကနဆှေဲကိုငျ မတျတပျရပျလို့လီးစုပျခိုငျးတာ အဖှားကွီးသသေခြောခြာကိုစုပျပေးသဗြာ သူလညျးလငျ၂ဆကျနဲ့သူပဲ ပညာဘယျသေးမလဲ ကနြျောစှဲအောငျကို ပညာပွစုပျတာ လီးကိုစုပျလကျြက ကနြေျာ့ကိုမော့ကွညျ့တယျ ကနြျောလညျးအပွာကားထဲကလိုဖီးတကျပွီးအျောရတော့တာပဲ အကွောပေါငျးစုံဆိမျ့တကျလာပွီး လီးရညျတှကေို ပနျးထညျ့ခွငျလာတာနဲ့ ဒျေါမွငျ့ခေါငျးကို ခြုပျကိုငျပွီး ပါးစပျထဲအဆုံးထိ ထိုးသှငျး လိုကျတာ အာဂလောငျနဲ့ဖိကပျပွီး ပနျးထညျ့နလေိုကျတာ ဒျေါမွငျ့လညျးအသကျရှူကွပျမှာပေါ့ ရုနျးတယျ အားခွငျးကမမြှ ဒါကိုယျက တကယျ့ဖီလငျ ခေါငျးကိုလှတျပေးလိုကျတော့မှ အဟှတျအဟှတျဆိုပွီး လီးရညျတှပေါးစပျထဲ သီးပွီးခြောငျးဆိုးနရှောတယျ
သိပျဆိုးတာပဲတဲ့ ပုဆိုးမဝတျသေးဘဲ အိမျရှလှေ့မျးကွညျ့မိတော့ တငျမာဝငျးတံခါးဖှငျ့ဝငျလာတယျ အိမျထဲမီးတှကေပွာကယာထှနျးပွီး
အဖှားကွီးကို အသိပေးရတယျ ခွရောလကျရာသိမျးပွီးအဖှားကွီးအိမျပျေါမှာအိပျပြျောနကွေောငျး ခွဟေနျလကျဟနျနဲ့ပွတယျ အိမျအောကျကွမျးပွငျကအရညျတှကေိုတော့ အငယျဆုံးမထမီယူ သုတျပလိုကျတယျ အိမျတံခါးဖှငျ့ထားလိုကျတယျ တငျမာဝငျးလညျး ရစေိုနဲ့ဆိုငျကယျလာထားပုံရတယျ အမရေောတဲ့ အဒျေါအိပျနတေယျအပျေါထပျမှာ လို့ ဟငျဒါဆိုပွငျးနမှောပေါ့ အိမျလိုကျခဲ့ပါလား တဲ့ ရစေိုအလှကလညျးဆှဲဆောငျနပွေနျတယျ ငါလုပျနိုငျပါ့အုံးမလား လို့လညျး သံသယဝငျပွနျတယျ တံခါးဝမှာ တငျသားတှတေငျးကားနတောကိုအသားပေးပွီးရပျစောငျ့နတေဲ့တငျမာဝငျးအကွညျ့ဟာကနြေျာ့ကို အသနားခံနတောလား ခွငျေ်သ့ကိုပွနျစားမဲ့ကဝမေသမငျရဲ့အကွညျ့လလေား ထီးအတူဆောငျးပွီး လိုကျသှားလိုကျတယျ ကွှကျသိုးအိမျထဲဝငျပွီးအာမီရမျတဈလုံး တောကွကျဥတှဝေငျယူခဲ့တယျ အဝတျအစားလဲပွီး ဆံပငျတှေ တံဘကျနဲ့သုတျရငျးအမွှီးလုပျပေးတယျ
တောကွကျဥ၂လုံးဗိုကျထဲအရငျ ပဈထညျ့ပွီး တငျမာဝငျးလုပျပေးတဲ့အမွညျးကိုစောငျ့တယျ စီးကရကျတဈဗူးလာခပြေးတာကို ဖှငျ့ပွီးဟနျပါပါသောကျနမေိတယျ ဆေးလိပျသိပျမသောကျတတျ အရကျလညးသိပျသောကျလမေ့ရှိတဲ့ငါ အခုတော့…. ရမျရဲ့အရသာက အူထဲပူဆငျးသှားတယျ အမွညျးအနညျးငယျစားရငျး အရကျငှဲ့ပေးနတေဲ့တငျမာဝငျးဟာ တဈခှကျပွီးတဈခှကျပိုလှလာတယျ အားအငျတှပွေနျလညျပွညျ့ဖွိုးလာသလို ခံစားရတဲ့လဈမဈအရောကျမှာ တျောပွီ မတငျမာဝငျး ကနြျောအတျောမူးနပွေီ မရတော့ဘူး ပွနျတော့မယျဆိုပွီးထလိုကျတာ ယိမျးထိုးယိုငျလဲသှားတယျ အမှနျတော့ ဒျေါမွငျ့လကျခကျြကွောငျ့ဒူးခွောငျသလိုဖွဈနတော ပွနျမနပေါနဲ့လား မိုးစဲထိနားနားနနေစေောငျ့ပါအုံးတဲ့ ကနြေျာ့ကို တှဲပွီး သူ့အိပျယာထဲ လှဲခိုငျးတယျ ကွမျးပွငျမှာ မှယေ့ာခငျးထားတဲ့အိပျယာပေါ့ မိုးသကျလကေလညျးအအေးဓါတျကို သယျလာဆောငျလာတယျ ခွငျထောငျခပြေးပွီး စောငျနဲ့ဘေးပတျလညျကာပေးတယျ ကနြေျာ့အပျေါကနကြေျောပွီးလကျထောကျ ခွငျထောငျကို ဖိပေးနတေဲ့တငျမာဝငျးဆီက ရမှေေးနံ့ရတယျ ခွငျထောငျကလညါး လြှောဖှပျပွီးသိမျးထားတာကိူအခုမှ ထောငျတဲ့သဘောပရုပျလုံးအနံ့က သနျ့ရှငျးမှုကိုခံစားရစတေယျ တံခါးပိတျသံ ပနျးကနျခှကျရောကျသိမျးဆညျးသံတှေ ငွိမျသှားတော့မှ တငျမာဝငျးခွငျထောငျထဲရောကျလာတယျ ။ ။ျ
လီးထိပျမှာ သားရညျနှငျ့ညှဈယူခံရသောအရသာမြိုးခံစားနရေပွီးအိပျမကျလိုလိုဖွဈနတေယျ အိပျယာခွငျထောငျအခငျးအာလုံးသူစိမျးပွငျပွငျ မှိနျဖြော့ဖြော့မီးရောငျကလညျး မှောရုံတောထဲရောကျနသေလိုလို ငါဘယျရောကျနလေဲ အတျောစဉျးစားယူလိုကျမှ ကနြေျာ့ကိုကြောပေး ကနြေျာ့လီးဆီက ထူးကဲသောအရသာပေးစှမျးနသေူမှာ တငျမာဝငျးပဲ အိပျမကျထဲမှာအခါခါ မယားအဖွဈမှနျးခဲ့ရသောတငျမာဝငျးအိပျမကျသခငျမ အခုတော့ ကနြေျာ့ကို ပွုစုပေးနရှောတယျ “”အား” လို့ကနြေျာ့မှာ အျောညညျးမိလာရတယျ လီးဒဈကနေ အာခေါငျအဆုံးအထိ စုပျသှငျးနတောကိုး ကနြျောမခံစားနိုငျတော့ တငျမာဝငျးထမိနျကိုလှနျပွီး ကနြေျာ့မကျြနှာပျေါခှခိုငျးလိုကျတယျ အမှေးတှပွေောငျရှငျးနတေဲ့ စောကျဖုတျကို လြှာနဲ့သိမျးကွုံး လှနျယကျပလိုကျတာ တငျမာဝငျးဆီက ညညျးသံထှကျလာတဲ့ အထိပဲ “”ကိုဇျော လိုးပါတော့” မီးရောငျဖြော့ဖြော့မှာ ရမကျမကျြဝနျးလေးတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျး စောကျဖုတျထဲထိုးသှငျးလိုကျတော့တယျ “အငျ့ အမေ့ အား အ အ” ကနြော့လကျမောငျးကို အတငျးဖဈြညဈကိုငျလာတယျ အားယူပွီး တစ တစ ဖွညျးရာကနမွေနျမွနျလေးလိုးပေးလိုကျတယျ တငျမာဝငျးဘာ့ကွောငျ့ လငျနဲ့ခနခနကှဲရတာလဲဆိုတာလကျတှသေိ့လာရတယျ ကွှကျသိုးပွောတဲ့ မြှော့ ဆိုတာသူ့အမ တငျမာဝငျးမှာ ရှိနတောပါပဲ
အောကျကနသေူမက ပွနျညှောငျ့ပေးရငျး ကနြေျာ့လီးတံတဈခုလုံးကို စုပျဆှဲယူနတေယျ ကောငျးလိုကျတာ ကနြျောလညျး “”ကောငျးလိုကျတာမိနျးမရယျ အခဈြရယျ “” တငျမာဝငျးဆံပငျစလေးသပျတငျပေးရငျး နုတျခမျးလေးစုပျရငျး ခဈြတယျမိနျးမရယျလို့ပွောပွီးလိုးနမေိတယျ ဒျေါမွငျ့ကို လိုးထားတာရယျ အရကျအရှိနျရယျကွောငျ့သာ ခနလေးနဲ့မပွီးသှားတာ တငျမာဝငျးကအတျောနှာထနျတာပဲ ဒါ့ကွောငျ့အရငျယောကျြားတှေ မနိုငျတော့ပဲ ကှဲကွ ကှာကွရတာ တငျမာဝငျးက အပျေါက တကျဆောငျ့ပေးပွနျတယျ ဖငျကို ရှနေ့ောကျပဈညှောငျ့တယျ စကောဝိုငျးပုံစံလှညျ့ပွီး လီးထဲလရညျကို ညှဈယူတယျ မထှကျသေး အပျေါအောကျခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့တယျ
“”အား အီး အား ဟငျးဟငျး အအား” ဆောငျ့ရငျး ကနြေျာ့လညျပငျးကိုလကျနဲ့သိုငျးဖကျပွီး ခေါငျးက နောကျပွနျလနျကမြတကျယိမျးထိုးနတေယျ အျောခကျြကတော့ မိုးသံလသေံကွောငျ့သာ ကနြျောလညျးပွီးခွငျလာပွီ အပျေါကခပျမွနျမွနျဆငျးခိုငျး လေးဘကျထောကျအနအေထားနဲ့ ခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့လိုးပဈတယျ ကနြေျာ့ဟာက ရှညျတယျ ခါးတိုတဲ့ တငျမာဝငျး သားအိမျကို ထိုးနမေိတယျ “”အား ကိုရယျ နာလိုကျတာ အား အားဆောငျ့ အောငျ့တယျ ပွီးတော့မယျ ဆောငျ့ ဆောငျ့ “”တဲ့ ဆံပငျတှပေါနောကျပွနျလှနျသိမျးပွီး ဆောငျ့လိုးခတြာ လထေဲတောငျမွောကျတကျသှားသလားမသိ ကာယလကေ့ငျြ့ခနျးက ဒီနရောမှာအသုံးဝငျလှတယျ အိပျယာထဲအသံစုံမွညျပွီး ၂ယောကျသားအျောညညျးသံနဲ့ ကနြျောလညျးတငျမာဝငျးဖငျအပျေါကနဆေောငျ့ပွီး သားအိမျထဲလီးရညျတှေ ပနျးထညျ့လိုကျမိတော့တယျ ပွီးတော့ အပျေါကမှီဖကျရငျးမှိနျးနတော ကနြေျာ့ကိုယျအလေးခြိနျကို ခံနိုငျသဗြာ မနကျ၎နာရီလောကျမှာ ကှေးကှေးလေးအိပျနတေယျ တငျမာဝငျးထမိနျလှနျပွီးကပျတှနျးလေး လိုးပေးလိုကျတယျ
“”ကိုရယျ ဖွညျးဖွညျးနျော မိနျးမသားအိမျတှအေောငျ့နလေို့”” အာ့ဆိုမလုပျရတော့ဘူးလား လိုးနတောကိုရပျလိုကျတော့ “”လုပျပါ ခံနိုငျပါတယျ” သူမြားကို စှဲအောငျလုပျပွီးတော့ မထားသှားနဲ့နျော ကိုဇျောကဆရာကွီးပဲ လူပြိုမဟုတျတော့ဘူးမလားပွော”” တငျမာ့ရှမှေ့ာ ဘယျနှဈယောကျလဲ”” ကနြျောသူ့မကျြနှာလေးဆှဲယူပွီး နုတျခမျးစုပျယူပဈပမေဲ့ ပွောကှာ သိခွငျတယျ တဲ့ “”တဈယောကျတညျးပါ “” ဆိုတော့ ဘယျသူလဲ တဲ့ ပွောပွပါအတငျးလုပျနတေယျ “”တကယျလို့ပွောပွရငျ စိတျထဲဘာမှမဖွဈပါဘူးလို့ကတိပေးမလား “”လို့ပွနျခြုပျတယျ
အငျး တကယျနျော တကယျ ကိုယျ့ရဲ့ပထမဆုံး လူပြိုဘဝကို ယူသှားသူက ယောက်ခမကွီးဒျေါမွငျ့ပဲ”” “”ဟယျ မမေေ နဲ့”” “”ကိုယျ့ကို စိတျဆိုးလား မိနျးမ”” မဆိုးပါဘူး တဲ့ နောကျကနလေိုးပေးနရေငျးကို သူ့အမနေဲ့ဘယျလိုဘယျပုံလိုးကွတယျဆိုတာက ခရစေတှေ့ငျးကြ မေးနသေဗြာ ဘယျနှဈခါ ဘယျနရော ကအစ အဲ့လိုပွောပေးနရေငျးကို အရညျတှစေိမျ့ထှကျလာပွီး တငျမာဝငျးကောငျးနတေယျ ပကျလကျဆှဲလှနျပွီး လီးကို အဆုံးထိ သှငျး ပွနျနုတျ အစိကို ခြျောထိုးလိုကျ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျပေးတော့ ကနြေျာ့ကို အတငျးဆှဲဖကျလာတယျ တငျမာဝငျးပွီးခွငျနပွေီ ခပျသှကျသှကျလိုးပေးလိုကျတော့ မကွာဘူး အတငျးဖကျပွီးငွိမျကသြှားတယျ မရဘူးလေ သူပွီးပမေဲ့ကနြျောက ဒါမြိုးကိုခွောငျးနတော ပေါငျနှဈခွောငျးကိုမ ပုခုံးပျေါခွနှေဈခွောငျးပဈတငျပွီး လိုးပလိုကျတယျ တကယျကို အျောတာဗြာ လေးဘကျထောကျခိုငျးပွီးထပျဆှဲတာ တငျမာဝငျး ငိုသံပါထှကျလာတယျ ကို့နာတယျ “”အား အား ဟငျ့ ဟငျ့တျောပါတော့ကိုယျရယျ ယောကျြားရယျတဲ့ ဒါမြိုးဇှဲခြှတျခွငျနတော တငျမာဝငျးလို့ စိတျထဲက ပွောနမေိတယျ အျောလေ လိုးလို့ကောငျးလပေဲ လှကွေီးထိုးရိုးရိုး ပွနျဆှဲလှနျပွီး လိုးတော့မှ ပွီးခွငျလာတယျ
စောကျစိကို လကျနဲ့ဆှပေးပွီး သုတျရညျကို ပနျးထညျ့တော့မှ တငျမာဝငျးလညျး နောကျတခြီထပျပွီးသှားပွနျရှာတယျ နာကငျြမှုနဲ့ရတဲ့အရသာကို တငျမာဝငျးစှဲသှားတယျဆိုတာ ကနြျောသိလိုကျတယျ “လူရိပျလူခွကွေညျ့အုံးကိုယျ “တဲ့ မနကျအလငျးရောငျဝိုးတဝါးမှာ တံခါးအသာလှပျလို့ ဖိနပျသံမကွားအောငျ လြှောကျလာခဲ့တယျ ဒျေါမွငျ့တံခါးဖှငျ့သံကွားရတယျ တငျမာဝငျးလှမျးကွညျ့နတောသိနတေော့ ခွံတံခါးအသာဖှငျ့ ကိုယျ့အိမျကိုယျပွနျတာကောငျးပါတယျလပေေါ့ တငျမာဝငျးတော့အီစိမျ့ပွီးကနျြနခေဲ့မှာသခြောတယျ လမျးလြှောကျရငျ ထော့နဲ့ထော့နဲ့ခွထေောကျနာနသေလိုလိုနဲ့လှမျးနတောကို ညနဘေကျမှာ တှရေ့တာပဲ ခဈြစဖှယျမကျြစောငျးတှထေိုးလို့ပေါ့ ကိုယျ့ထကျအသကျခုနှဈနှဈလောကျကွီးပမေဲ့ ကိုယျ့ထကျငယျသှားသလိုပဲ လူရှငျးလို့ ညလာခဲ့ ရမလား ဆိုတော့ နှဈရကျလောကျနားပါရစအေုံး တဲ့ ကနြျောလညျး ဒျေါမွငျ့တလှညျ့ တငျမာဝငျးတလှညျ့ လိုးပေးနတော ၂နှဈလောကျကွာတော့ အငယျဆုံးမလေးစန်ဒာနဲ့ကနြေျာ့ကို သဘောတူပေးစားကွတယျ ကနြျောကလညျး ငွငျးမနဘေူး ခေါငျးညိမျ့လိုကျတယျ ဟီး ………..။။ ပွီး
သူငယ်ချင်းနာမည်ကကြွက်သိုး ငယ်ငယ်ကတည်းကဆော့ဖော်ဆော့ဖက် ဒီကောင်က၇တန်းလောက်မှာကျောင်းထွက်သွားတယ် အပြင်လောကအကြောင်းနောကြေတယ် ဒီကောင့်ကြောင့်ပဲဂွင်းထုတတ်လာတာ နှာကိစ္စကတော့ စကားပြောတိုင်းပါတယ် သူ့အမလင်မယားလိုးတာပါ ခြောင်းပြီးထုတဲ့ကောင် သူ့အမအကြီးဆုံး လင်နှစ်ယောက်ယူထားတယ် ခြံဝိုင်းထဲမှာပဲ အိမ်ဆောက်နေတယ် ပထမယောင်္ကျားသေပြီးတော့ ဒုတိယအိမ်ထောင်ထူတယ်ပေါ့ ဖင်အငြိမ်ဆုံးပေါ့ ကျနော်တို့ကမကြီးမခိုင်လို့ခေါ်ကြတယ် သူ့အောက်ကတော့ တင်မာဝင်း သူကတော့ ၂လင်ကွာ ခလေးတစ်ယောက်အမေ ကြားထဲမှာ အပျော်ကုံးတဲ့လင်တွေကလည်းမနည်းလှ ကြွက်သိုးအထက်က အစ်ကိုကအရက်သမား စိတ်ကောင်းရှိတယ် အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကလည်း အပျိုဖြန်းဆတ်စလူးထနေပြီ
ကြွက်သိုးက ကျနော့်အပေါ်သဘောအတော်ကောင်းတဲ့ကောင်သူမိန်းမယူပြီးတော့တောင် သူ့မိန်းမကိုလေးဘက်ထောက်ခိုင်းထားပြီး ကျနော့်ကို တံခါးအကွယ်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီး သူ့မိန်းမစောက်ပတ်ကို ပြတယ် သူ့မိန်းမက မသိရှာ နော်လည်းလက်နဲ့ထိကိုင်ကြည့်မိတယ်
မိန်းမယူထားပေမဲ့ကျနော်နဲ့အတွဲမပြတ် သူတို့တစ်အိမ်လုံးက ကျနော်နဲ့ကြွက်သိုးကို လင်မယားလို့ခေါ်ကြတယ် ကြွက်သိုးက ကျနော့်ကို ပြောဖူးတယ် ငဇော်မင်းကိုစိတ်ချတာတစ်ခုရှိတယ် မင်းမှာကြာကူလီစိတ်မရှိတာပဲ ငါကတော့ ရလို့ကတော့အကုန်လိုးမှာ ဒါ့ကြောင့်လဲ ကြွက်သိုးကကျနော့်ကို စိတ်ချတာ ကြွက်သိုးက သူ့အမေမုဆိုးမဒေါ်မြင့်နဲ့စီးပွားမခွဲ ကုန်ကူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်
အိမ်ထောင်ဦးစီးပေါ့ ရထားနဲ့ကုန်ကူးတယ် ဈေးမှာသူ့အမေဒေါ်မြင့်က ရောင်းတယ် အပျိုပေါက်မ စန္ဒာရယ် ကြွက်သိုးရယ် အရက်သမားရယ်က ကူလုပ်ရတယ် ကြွက်သိုးအမေက လူကြားထဲတောင် အတော်နောက်တာ လူပျိုကြီးဂွေးကြည့်ခြင်လို့ဆိုပြီး ပုဆိုးဆွဲချွတ်တာ အဲ့လိုနောက်တာကို မိသားစုစုံတိုင်းလုပ်လေ့ရှိတယ် ကျနော်ကရှက်ပြီး ပြေးရင် ဝိုင်းရီကြတာ ဓလေ့လိုဖြစ်နေပြီ
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အမြဲစိတ်ပါဖီးလာတာက တင်မာဝင်း သူတို့ခြံဝင်းထဲ လူရှင်းတဲ့ရက်ဆို ကျနော်တင်မာဝင်းကို ကြံဖို့ချောင်းတယ် ဒါပမေဲ့မရဲပါဘူး တင်မာဝင်းကလည်း တစ်လတစ်ခေါက်တော့ ကုန်ကူးတယ် သူ့စီးပွားနဲ့သူ တစ်ရက်နေ့လည်ပိုင်း လူရှင်းတော့ တင်မာဝင်း ကိုတွေ့လိုတွေ့ညားသွားချောင်းတယ် ကြွက်သိုးအိမ်အောက်ကနေကြည့်နေတုန်း ဒေါ်မြင့်က သူ့အိမ်မကြီးကနေ ဟဲ့ငဇော် ကြွက်သိုးညက ခရီးထွက်သွားတယ် လေနင်မသိဘူးလားလို့ရုတ်တရက်လှမ်းအော်တော့ လန့်တောင်သွားသေး ဒေါ်မြင့်က ဈေးရောင်းလို့လားမသိ အသံကတော့ အော်ကျယ် အော်ကျယ် ဟဲ့ကောင်လေးလာစမ်း ငါ့ကိုလာကူစမ်းဆိုတော့ ကျနော်လည်း အိမ်မကြီးပေါ်တက်သွားတယ် ဒေါ်မြင့်မျက်နှာက မကြည်မသာ အဒေါ်နေမကောင်းလို့လားဆိုတော့ အေးဟယ် ဟိုဟာတွေစိတ်မချပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူးလာပြန်နားရတာပဲ တံခါးမကြီးပိတ်ထားလိုက်ငဇော် ကြက်တွေခွေးတွေတက်လို့တဲ့ ခန်းစည်းချထားတဲ့အခန်းထဲကို ရှေ့က ဝင်သွားပြီး လိုက်ခဲ့တဲ့ ကုတင်ပေါ်ခြေဆင်းထိုင်ချလိုက်တယ် အဒေါ်ကျနော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ ငါ့ကိုဇက်ကြောဆွဲနှိပ်ပေးစမ်းဘာဟယ် အကြောတွေတက်နေတယ် ဆေးသောက်တာလည်းမရဘူးဟယ်
ကျနော်လည်းဇက်ကြောဆွဲဂုတ်ပိုးသားတွေ နှိပ်ပေးတယ် ဆွဲကြိုးအတုတ်ကြီးက ဆွဲထားသေး ဆွဲကြိုးက ခံနေတော့ ဆွဲကြိုးခြွတ်ခိုင်းတယ် ဒေါ်မြင့်နှိပ်ခိုင်းသမျှနှိပ်ပေးရတယ် ပေါင်တွင်းကြောတွေကို နှိပ်ခိုင်းပြန်တယ် ပေါင်တွင်းကြောတွေကို ထမိန်အောက်ထဲလက်ဝင်ခိုင်းပြီး နှိပ်ခိုင်းတော့ ဒေါ်မြင့်ရဲ့အဖုတ်မည်းကြီးက ပေါ်နေတယ် ကျနော်လည်းအဲ့ကျမှ မရိုးမသားစိတ်တွေဖြစ်လာတာပဲ ဒေါ်မြင့်က ပေါင်ခြံလေးကို နှိပ်စမ်းပါခလေးရယ် ဆိုပြန်တော့ စောက်ဖုတ်က တင်ကြီးမြင်နေရတယ် အသက်၅၀ကျော်ပေမဲ့ လူကပိန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်မြင့်က အတွင်းပိုင်းအသားအရည် ပျော့တွဲမနေဘဲ ကျစ်လျစ်နေတယ် ကျနော့်ကို ဆီးခုံအပေါ်ကိုလည်းနှိပ်ခိုင်းတယ် ထမိန်ကို မပေါ်ပေါ်အောင်နှိပ်ခိုင်းနေမှန်းသတိထားမိလာတယ် ကျနော့်ပေါင်ကိုလည်း ပြန်ပွတ်ပေးနေတော့ စိတ်ကထလာပြီး ငပဲက ထလာတယ် ထမိန်ပေါ်ရက်နဲ့ကိုထထိုင်ပြီး ကျနော့ကို ခြေဆင်းထိုင်ခိုင်းပြီးသူကလည်းကျနော့်ခြေထောက်ပေါ်သူ့ခြေဆင်းထိုင်လို့ မျက်နှာခြင်းဆိုင် ဇက်ကြောကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်
နှိပ်နေရင်းက ကျနော့်ပေါင်ပေါ်လက်ရောက်လာတယ် ပြီးတော့ ကျနော့်ငပဲကို ကုဆိုးပေါ်က ကိုင်လိုက်တယ် ပါးစပ်ကလည်း ဒီတခါတော့ မိပြီ လို့ပြောတယ် ပုဆိုးလှန်ပြီး လီးကို ကိုင်ဆွတော့ ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူးအဒေါ်ကျနော်မရတော့ဘူး လွှတ်ပါတော့ဆိုလည်းမရဘူး အဒေါ်လရည်တွေထွက်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပေါင်ကားပေးတယ် ကျနော်လည်း အံ့အားသင့်နေတယ် ဘာလုပ်နေလဲဒီထဲပန်းထည့်တဲ့ တကယ့်တကယ်လုပ်တော့ အပေါက်ကမတည့် အတွေ့အကြုံမရှိတော့ဒေါ်မြင့်ကကိုင်ပြီး တေ့ပေးရတယ် တခါတည်းဒေါ်မြင့်စောက်ဖုတ်ထဲလီးဝင်သွားတာနဲ့အားရှိသမျှလိုးပစ်တယ် လရည်ကမကြာဘူးထွက် သွားတယ်… ဒါပေမဲ့ဆက်လိုးခြင်နေတာနဲ့လိုးနေလိုက်တယ် ဒေါ်မြင့်ကအပေးကောင်းတော့ကြာလည်းကြာ ကောင်း လည်းကောင်းဒေါ်မြင့်လည်း ပြီးသွားတယ် ကျနော်လီးကို သုတ်ပေးပြီး ပါးစပ်လုံပစေနော်
ထပ်လုပ်ခြင်ရင်တဲ့….. ဒေါ်မြင့်နှင့်မထင်မှတ်ဘဲစားလိုက်ရတာဟာ ကျနော်ရဲ့ပွဲဦးထွက်ကံကောင်းမှုဆိုတာနောက်ပိုင်းနှစ်ကာလတွေအတော်ကြာမှ သုံးသပ်သိရှိရပါ စိတ်လက်ကြည်လင်ပေါ့ပါးပြီး ကြွက်သားတွေလည်းပျော့ပျောင်းလို့နေတယ် လူဟာ ငါစားဖူးပြီဆိုတဲ့ ဘဝင်လေးလည်းဖြစ်နေတယ် ကြွက်သိုးကလည်းပြန်မရောက်သေးတော့ တိုင်ပင်ဖော်မရှိ ဒေါ်မြင့်နဲ့နေ့လည်ဖက်ဆုံရမလား ဈေးဆိုင်ဖက်လမ်းကြုံသလိုနဲ့ဝင်ပေမဲ့ ဒေါ်မြင့်ကတော့ စကားလမ်းကြောင်းလည်း ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ နောက်တစ်ခုက ခပ်တည်တည်ခပ်တန်းတန်းဖြစ်နေသလိုပဲ အရူးအမဲသားကြွေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မှာ ဒေါ်မြင့်ကို အရင်က ဂွင်းမှန်းထုတဲ့အထဲတောင်မထည့် တင်မာဝင်းကသာထိပ်ဆုံး အခုတော့ ဂွင်းထုရတဲ့အရသာတောင်မကြိုက်တော့ တင်မာဝင်းကိုတောင်သွားခြောင်းဖို့စိတ်မလာတော့ ဒေါ်မြင့်ဈေးဆိုင်မလာဘူးဆိုတဲ့နေ့က နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားခြင်းပါပဲ အခြေအနေအချိန်အခါပေးပါလျက် ဒေါ်မြင့်ရယ် သူရယ် ခြံဝင်းထဲမှာ ၂ယောက်တည်း ဒီထက်အခြေအနေအချိန်အခါပေးတာမရှိ ကြွက်သိုးပြန်မရောက်သေးဘူးငဇော်ရေ တဲ့ လှေကားအတိုင်းအိမ်ပေါ်တက်တော့တံခါး ပိတ်ထားတယ် တံခါးခေါက်ပေမဲ့တံခါးထမဖွင့်ပေး ဒါတောင်ဆယ်မိနစ်လောက်စောင့်သေးတယ် စိတ်ထဲမှာရှက်တာရယ် မခံခြင်စိတ်ဖြစ်သွားတာရယ်က ကျနော့်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားစေတယ် အားကစားရုံမှာ ဝိတ်သွားမတယ် အပြေးလေ့ကျင့်တယ် ကြိုးခုန်တယ် ဒေါ်မြင့်အာရုံထဲက ထွက်ဖို့အားကစားနဲ့ အာရုံပြောင်းလိုက်တယ် သိပ်တော့မလွယ်ကူလှ ကြွက်သိုးကျနော့်အိမ်လာသေးတယ်လို့ပြောတယ် မဆုံဖြစ်တာ မသွားဖြစ်တာ ၃လနီးပါးရှိသွားတယ်
ဂွင်းမတိုက် ဖာမချတော့ အသားအရည်ကျစ်လျစ်ပြီး လူဟာလန်းဆန်းလို့နေတယ် အားအင်ကအပြည့် ၆လတခေါက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အဖေတောင်ကျနော့်ကို အတော်အံ့သြချီးကျူးနေတယ် သုံးဖို့စွဲဖို့လည်းအတော်များများအမေတို့မသိအောင်ပေးသွားသေးတယ် ကျနော်အရင်ကဖြစ်သလိုဝတ်စားတာတွေ နေထိုင်မှုတွေကအစပြင်ပလိုက်တယ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းသပ်ခက်ခက် လူကြီးဆန်တဲ့အဝတ်အစားကိုပဲဝတ်ဖြစ်တော့တယ် တောက်ပဈေးကြီးတာမျိုးတော့မဝတ် နောက်ပိုင်းမှသိလာတာက ဂွင်းမထု ဖာမချဘဲ အားကစားပုံမှန်လုပ်တဲ့အကျိုးဟာ ကျနော့်ကို အတော်အကျိုးရှိတာပါပဲ ယုံမလားမသိ မိန်းမတွေပျိုပျိုအိုအို လိင်တိမ်းညွှတ်မှုရှိလာတာပဲ ကြွက်သိုးအိမ်ကိုခဏခဏလာတာအားနာစရာကောင်းတယ် သူ့အိမ်သွားလိုက်ပါအုံးအမေကပြောတာနဲ့ညဘက်ထွက်သွားလိုက်တယ် ဒေါ်မြင့် ကြွက်သိုးတိုမိသားစုအစုံအလင် ထမင်းစားနေတာနဲ့ကြုံတယ် ကျနော့်ကို တံအံ့တသြကြည့်နေကြတယ် ထမင်းစားပြီးတော့ကြွက်သိုးတို့အိမ်ဘက်သွားကြ သူငယ်ချင်း၂ယောက်စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ကြပေါ့ နှာအကြောင်းမမေးတော့လို့ကြွက်သိုး
အံ့သြနေတယ် အိမ်ပြန်တော့ အပြင်သွားမလို့လုပ်နေတဲ့ တင်မာဝင်းက အဖော်လိုက်ပေးပါအုံးဆိုပြီး လက်ကိုအတင်းဆွဲတယ် လမ်းထဲမှာမှောင်နေတော့ တင်မာဝင်းက ကိုယ်ချင်းထိပြီး လျှောက်နေတယ် အမေတို့ ကြွက်သိုးတို့အိမ်ပဲ နင်ကလာတာ ငါ့အိမ်ကိုလာလည်ပါအုံးဟယ် ငါကအိမ်မှာ အမြဲတမ်းရှိတယ် လာခဲ့နော်တဲ့ စုပ်ရောလာဒ်ရောပွင့်တယ်ဆိုတာ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းသိရတော့တာပါပဲ ။
အရင်ကအဖတ်တောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့၂လင်ကွာခလေးတစ်ယောက်အမေတင်မာဝင်းကိုယ်လုံးခြင်းလာထိပြီးဖိတ်ခေါ်နေပြီ ကျနော့်အနေနဲ့တိုးတက်မှုကိုမြှင့်သထက် မြင့်စေချင်တာကတစ်ဖက် တင်မာဝင်းရဲ့ အရပ်ပုပု ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်လှလှနဲ့ ကြာမျက်လုံးကြာနုတ်ခမ်းတွေဆီက ခေါ်သံကိုပြန်ထူးခြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရှိနေပြန်တယ် မနက်ဈေးခေါင်းကွဲတဲ့အချိန်မှာကြွက်သိုးကျနော့်ကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကကျနော်ထိုင်နေကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆီရောက်လာ ခဲ့တယ် ဒီသတင်းနဲ့အတူမကြာတဲ့အချိန်မှာ ကြွက်သိုးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ရောက်လာပြီး သယ်ရင်းမင်းကိုအမေကအရေးကြီးတိုင်ပင်စရာရှိလို့ ငါ့ကိုလာရှာခိုင်းတယ် သွားရအောင် တဲ့ ဒေါ်မြင့်ကအိမ်အပေါ်ထက်ကဆက်တီစားပွဲခုံမှာ ဆေးပေါ့လိပ်ဖွါရင်းစောင့်နေတယ် ကြွက်သိုးကတော့ ကျနော့်ကိုထားပြီး သူ့အိမ်ဘက်ထွက်သွားတယ် အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့အဒေါ် ကျနော်စကားစပြီးထိုင်တော့ သိပ်တော့လည်းအရေးကြီးတယ်ရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ကိစ္စကိုရှင်းတယ် ဒီလိုပါ ဒေါ်မြင့်က၂လုံးထီစာအုပ်တွေကိုဆွဲစားခြင်တယ် သူတစ်ယောက်တည်းမနိုင်ဘူး ကျနော်ကပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှန်းသိလို့ ရှယ်ယာတစ်ဝက်ပါနိုင်သလား နာမည်ခံပေးမှာက ဒေါ်မြင့် စာအုပ်တွေကို မိသားစုထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုသိမ်းခိုင်းမယ် ခြံဝင်းတံခါးပိတ် အိမ်တံခါးပိတ်ပြီးစာအုပ်တွေကိုစစ် အလျော်အစားလုပ်ရုံ အန္တရယ်ဖမ်းရယ်ဆီးရယ်ဆိုရင် စာအုပ်တွေမီးရှို့အလွယ်တကူလက်စဖျောက်ဖို့လည်းလွယ်တယ်
ပြေးပေါက်လည်းရှိတယ် ကျနော်လည်းအလုပ်မရှိတာနဲ့စာရင်မဆိုးပါဘူးပေါ့ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ် အိမ်ကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးကျနော့်သဘော အလုပ်စလုပ်ခါစက မကျွမ်းသေးတော့ စာရင်းတွေစာအုပ်တွေအလျော်အစား ငွေကအစ စိစစ်ရတော့ ညနေစောင်းမှောခါနီးမှသက်ပြင်းချနိုင်တယ် ဒေါ်မြင့်ကတော့ ကျနော်နဲ့ကံစပ်တယ်ချည်းပြောနေတော့တာပဲ…. အလုပ်သဘောလည်းကျွမ်းသွားပြီ အကျိုးအမြတ်ကလည်းအတော်ရတယ်ဆိုရမယ် ဒေါ်မြင့်ကဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်ပြီး စာအုပ်သိမ်းဖို့လုပ်တယ် အဲဒိမှာတင်မာဝင်းက သူစာအုပ်သိမ်းပေးမယ် အားအားနေခလေးမုန့်ဖိုးရတယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဇာတ်လမ်းထဲဝင်လာတယ် ဒေါ်မြင့်လည်းဈေးဆိုင်ခင်းဈေးရောင်းအလုပ်တွေမလုပ်ရတော့ဘဲ အိမ်မှာအဆီအစိမ့်စားနေရလို့လားမသိ ပိန်ခြောက်ကပ်ကနေ အသားရည်ပြည့်ပြီး ဆူဖြိုးလာ အသားဖြူလာတယ် ၂ထပ်သစ်သားအိမ်ကိုမြှင့်ပြီးအိမ်အောက်ထပ်ကို အုတ်ပတ်ကားလုပ်တယ် အခန်းဖွဲ့ပြီး အိမ်ကိုလုံခြုံလှပအောင်ပြင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ် ကျနော်ကတော့ ကျနော့်အကျိုးအမြတ်ဝေစုကို အမေ့နာမည်နဲ့ဘဏ်ထဲကိုထည့်ခိုင်းထားတယ် သူငယ်ချင်းကြွက်သိုးကိုအရင်းတောင့်အောင် ပိုက်ဆံထောက်ပံ့ပေးတယ် ကျနော်သတိထားမိနေတာကြာပြီအရင်ကတော့အလုပ်ဇောနဲ့သတိမပြုမိ ဒေါ်မြင့်ကစာရင်းလုပ်ရင်လည်းကျနော်နဲ့ပူးပူးကပ်ကပ်ထိုင်တယ် လက်ကိုင်လိုက်ပေါင်ပွတ်လိုက်နဲ့ အပြင်ကလူရိပ်လူသံကြားမှ ထပြီး လူလာရင်တံခါးဖွင့်မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာထိုင်တယ် ကျနော်လည်းသွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ် တင်သားရင်သားငှါးစွင့် ရေဆင်းငါးကြီးလိုဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်မြင့်ရဲ့အထိအတွေ့ကိုသာယာမိတာအမှန်ပဲ ဒါပေမဲ့ဟန်ဆောင်ထားရတယ် စကားနဲ့လည်းမြူဆွယ်တာပဲ ယောက်ျားမရှိတာကြာတော့ယောက်ျားရဲ့အပြုအစုအယုအယလေးတော့လိုခြင်သား တခါတလေဆို သားအိမ်ကတောင် ယားကျိကျိဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အခြားအကြောင်းပြောရင်းကလမ်းကြောင်းပြောင်းလာတယ် ဖုန်းနဲ့အလုပ်ရလာတော့ တင်မာဝင်းက ဖုန်းနဲ့စာရင်းအနှစ်ချုပ်လှမ်းတင်တယ် အဲဒိရက်က ၂လုံးထီထွက်မဲ့ရက်ကိုမထွက်ဘူး ဒီတော့ တံခါးတွေပိတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာ ပူလောင်အိုက်စက်နေတယ် တံခါးကလည်းအမြဲပိတ်နေကြ ထဖွင့်လို့မရ ဒေါ်မြင့်ကတော့ရှင်းတယ် သူ့အတွက်အခွင့်ကောင်းဆိုတော့ အိုက်လိုက်တာဟယ် ဆိုပြီး ဗလာစီယာနဲ့ယက်ခပ်နေတယ် ထမိန်ကိုလည်းပေါင်သားတွေပေါ်အောင်လုပ်နေတယ် အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်ပြားပေါ်မိုးသီးမိုးပေါက်တွေရွာချလာတော့ ငဇော်ရေ အိမ်အပေါ်ထပ်တံခါးတွေမပိတ်ထားဖူးလားမသိဘူး မိုးပက်ထည့်ကုန်မယ် လာကူအုံးဆိုပြီး လှေကားပေါ်ဦးဆောင်တက်သွားတယ် အောက်ကနေဖင်လုံးကြီးတွေကို ကြည့်ရင်းတက်နေရတော့ စိတ်ကမရိုးမရွ အရင်ကဒေါ်မြင့်နေတဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတယ် ဒီတံခါးက အားနဲ့ဆွဲမှရမယ်လာပါအုံး နင့်အားသန်သန်နဲ့လို့ခေါ်တယ် တံခါးကကြပ်တာတော့မှန်တယ် မိုးလည်းလုံပါတယ် တံခါးကိုအားနဲ့ဆွဲနေတဲ့ကျနော့်ခါးကိုနောက်ကနေ ဒေါ်မြင့်ကိုင်ထားတယ် ရလားကွယ့် ရလားကွယ့် ပြောပြီး ကျနော့်ခါးကို ဖက်ပြီးကျနော်နဲ့အတူကူဆွဲတယ်ပေါ့ တကယ်တော့အဲဒိတံခါးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျနော်လည်းသိ ဒေါ်မြင့်လည်းအသိ နို့နဲ့နောက်ကနေပွတ်နေတာကအားပိုပါနေသလိုပဲ ဆင်နဲ့ဆွဲတာတောင်မရ အခန်းကမှောင်နေတယ် မရဘူးအဒေါ် ကျနော်နောက်ပြန်လှည့်တဲ့အထိ မခွါ ဒေါ်မြင့်ပုခုံးကို ကိုင်ပြီးကျနော်လည်း စဉ်းစားနေမိတယ် လုပ်သင့်မလုပ်သင့် အဖွားကြီးလက်က ကျောတွေကိုပွတ်နေပြီ
မျက်နှာကိုမော့ပြီးထိုးပေးနေတယ် ကျနော်မလုပ်ခြင်ဘူးလို့စိတ်ထဲကပြောနေမိတယ် ပုခုံးပေါ်ကလက်ကို ဖယ်ပြီးငြင်းမလို့ လက်နှစ်ဖက်က ဒေါ်မြင့်ဖင်သားဆိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လျှပ်စစ်အမဓါတ်ကစီးဝင်လာနေတော့တယ် ဖင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်ပေးနေမိတယ် စောစောကမော့ပေးနေတုန်းကတော့ဖီးမလာ အခုတော့ဒေါ်မြင့်မျက်နှာကို ဆွဲယူပြီး နုတ်ခမ်းစုပ်နေမိတယ်
ဒေါ်မြင့်ကလည်းခေသူမဟုတ် ပြန်စုပ်တယ် သူစုပ်ရင် ကိုယ်ကနား သူနားရင်ကိုယ်ကစုပ်နဲ့အပေးအယူမျှနေတယ် လျှာခြင်းထိရင်းစုပ်နမ်းတဲ့အခါ ကျနော့်ထိန်းချုပ်သမျှဟာပွင့်ထွက်သွားတော့တယ် ကုတင်ပေါ်ဒေါ်မြင့်ကို ပစ်တင်ပြီးရမက်ကြမ်းတွေနမ်းမိတယ် နို့တွေကိုလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းညှစ်ခြေရင်း စောက်ဖုတ်ကိုလည်း လက်နဲ့ပွတ်နေမိတယ် ဘဝမှာရွှဲစိုနေသောစောက်ဖုတ်ကိုပထမဆုံးကိုင်ဖူးတာပဲ ဘယ်တုန်းကထမိန်ချွတ်ထားလည်းမသိ ကျနော်ပုဆိုးလှန်ပြီးစောက်ဖုတ်နဲ့လီးကို ပွတ်တော့ တဟင်းဟင်း ငြီးရှာတယ် ငဇော် မောင်လေး လိုးတော့ကွယ် ထည့်ပါတော့တဲ့
လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုးသွင်းတော့ အား အမလေး လို့အော်တယ် ခုတင်စောင်းတင်ပြီး ခပ်ကြောင်းညှောင့်ပေးတော့ လက်တွေက ကျနော့်လက်နှစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားတယ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို လိုးပစ်ခြင်စိတ်က ကျနော့်ကိုကစားခဲ့တဲ့ဒေါ်မြင့်ဒီတခါတော့ နင့်အလှည့်ပဲတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုတဲ့ ကြိမ်းဝါးခဲ့မှုကိုသတိရမိတယ်
မိုးသံလေသံကြားမှာ ကုတင်တိုင်တွေက ပျဉ်နံရံတွေကိုသွားဆောင့်နေတာ တဒိုင်းဒိုင်း ဒေါ်မြင့် အားအားအား အမလေး အော်သံကလည်း ညံလို့ ဖင်သားတွေအိကျသွားအောင်ဖိလိုးလိုက် ပုခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကို အမျိုးမျိုးဖြဲလိုက်စုလိုက်နဲ့လိုးပစ်နေလိုက်တယ် ကျနော်နှစ်ချီလောက်ပြီးနေပြီ ဒါပေမဲ့မရပ်ဘူး လီးနဲ့စောက်ဖုတ်တပ်လျက် ကျနော့ကိုခွဖက်ခိုင်းပြီး အောက်ထပ်ကို မချီလာ အောက်ထပ်က ကြမ်းခင်းမှာလည်းထပ်လိုးလိုက်တယ် အဖွားကြီးကို အငြိုးနဲ့ကြောက်သွားအောင်လိုးပစ်နေပေမဲ့ ပြန်ရတဲ့ရလာဒ်က ပြောင်းပြန် ဒေါ်မြင့်ကျနော့်ကိုသိသိသာသာဖက်လာတယ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်နေတယ် ကျနော့်ခါးကို ခြေကျင်းလိမ်ပြီးအတင်းဖိကပ်ထားနေတော့ တယ်ငိုသံလိုလို ရီသံလိုလို အော်ညဉ်းပြီး တုန်တက်ပြီးငြိမ်သွားတော့တယ် အတော်ကြာမှ ကိုဇော် ဆိုပြီးကျနော့်ကိုနမ်းတယ် ကျနော့်လီးကအတောင်မကျ ဒေါ်မြင့်ကိုထထိုင်ခိုင်းပြီး ကျနော်လည်းခေါင်းကို ဆံပင်ကနေဆွဲကိုင် မတ်တပ်ရပ်လို့လီးစုပ်ခိုင်းတာ အဖွားကြီးသေသေချာချာကိုစုပ်ပေးသဗျာ သူလည်းလင်၂ဆက်နဲ့သူပဲ ပညာဘယ်သေးမလဲ ကျနော်စွဲအောင်ကို ပညာပြစုပ်တာ လီးကိုစုပ်လျက်က ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်တယ် ကျနော်လည်းအပြာကားထဲကလိုဖီးတက်ပြီးအော်ရတော့တာပဲ အကြောပေါင်းစုံဆိမ့်တက်လာပြီး လီးရည်တွေကို ပန်းထည့်ခြင်လာတာနဲ့ ဒေါ်မြင့်ခေါင်းကို ချုပ်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိ ထိုးသွင်း လိုက်တာ အာဂလောင်နဲ့ဖိကပ်ပြီး ပန်းထည့်နေလိုက်တာ ဒေါ်မြင့်လည်းအသက်ရှူကြပ်မှာပေါ့ ရုန်းတယ် အားခြင်းကမမျှ ဒါကိုယ်က တကယ့်ဖီလင် ခေါင်းကိုလွှတ်ပေးလိုက်တော့မှ အဟွတ်အဟွတ်ဆိုပြီး လီးရည်တွေပါးစပ်ထဲ သီးပြီးချောင်းဆိုးနေရှာတယ်
သိပ်ဆိုးတာပဲတဲ့ ပုဆိုးမဝတ်သေးဘဲ အိမ်ရှေ့လှမ်းကြည့်မိတော့ တင်မာဝင်းတံခါးဖွင့်ဝင်လာတယ် အိမ်ထဲမီးတွေကပြာကယာထွန်းပြီး
အဖွားကြီးကို အသိပေးရတယ် ခြေရာလက်ရာသိမ်းပြီးအဖွားကြီးအိမ်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေကြောင်း ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ် အိမ်အောက်ကြမ်းပြင်ကအရည်တွေကိုတော့ အငယ်ဆုံးမထမီယူ သုတ်ပလိုက်တယ် အိမ်တံခါးဖွင့်ထားလိုက်တယ် တင်မာဝင်းလည်း ရေစိုနဲ့ဆိုင်ကယ်လာထားပုံရတယ် အမေရောတဲ့ အဒေါ်အိပ်နေတယ်အပေါ်ထပ်မှာ လို့ ဟင်ဒါဆိုပြင်းနေမှာပေါ့ အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလား တဲ့ ရေစိုအလှကလည်းဆွဲဆောင်နေပြန်တယ် ငါလုပ်နိုင်ပါ့အုံးမလား လို့လည်း သံသယဝင်ပြန်တယ် တံခါးဝမှာ တင်သားတွေတင်းကားနေတာကိုအသားပေးပြီးရပ်စောင့်နေတဲ့တင်မာဝင်းအကြည့်ဟာကျနော့်ကို အသနားခံနေတာလား ခြေင်္သ့ကိုပြန်စားမဲ့ကဝေမသမင်ရဲ့အကြည့်လေလား ထီးအတူဆောင်းပြီး လိုက်သွားလိုက်တယ် ကြွက်သိုးအိမ်ထဲဝင်ပြီးအာမီရမ်တစ်လုံး တောကြက်ဥတွေဝင်ယူခဲ့တယ် အဝတ်အစားလဲပြီး ဆံပင်တွေ တံဘက်နဲ့သုတ်ရင်းအမြှီးလုပ်ပေးတယ်
တောကြက်ဥ၂လုံးဗိုက်ထဲအရင် ပစ်ထည့်ပြီး တင်မာဝင်းလုပ်ပေးတဲ့အမြည်းကိုစောင့်တယ် စီးကရက်တစ်ဗူးလာချပေးတာကို ဖွင့်ပြီးဟန်ပါပါသောက်နေမိတယ် ဆေးလိပ်သိပ်မသောက်တတ် အရက်လညးသိပ်သောက်လေ့မရှိတဲ့ငါ အခုတော့…. ရမ်ရဲ့အရသာက အူထဲပူဆင်းသွားတယ် အမြည်းအနည်းငယ်စားရင်း အရက်ငှဲ့ပေးနေတဲ့တင်မာဝင်းဟာ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ပိုလှလာတယ် အားအင်တွေပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးလာသလို ခံစားရတဲ့လစ်မစ်အရောက်မှာ တော်ပြီ မတင်မာဝင်း ကျနော်အတော်မူးနေပြီ မရတော့ဘူး ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးထလိုက်တာ ယိမ်းထိုးယိုင်လဲသွားတယ် အမှန်တော့ ဒေါ်မြင့်လက်ချက်ကြောင့်ဒူးခြောင်သလိုဖြစ်နေတာ ပြန်မနေပါနဲ့လား မိုးစဲထိနားနားနေနေစောင့်ပါအုံးတဲ့ ကျနော့်ကို တွဲပြီး သူ့အိပ်ယာထဲ လှဲခိုင်းတယ် ကြမ်းပြင်မှာ မွေ့ယာခင်းထားတဲ့အိပ်ယာပေါ့ မိုးသက်လေကလည်းအအေးဓါတ်ကို သယ်လာဆောင်လာတယ် ခြင်ထောင်ချပေးပြီး စောင်နဲ့ဘေးပတ်လည်ကာပေးတယ် ကျနော့်အပေါ်ကနေကျော်ပြီးလက်ထောက် ခြင်ထောင်ကို ဖိပေးနေတဲ့တင်မာဝင်းဆီက ရေမွှေးနံ့ရတယ် ခြင်ထောင်ကလညါး လျှောဖွပ်ပြီးသိမ်းထားတာကိူအခုမှ ထောင်တဲ့သဘောပရုပ်လုံးအနံ့က သန့်ရှင်းမှုကိုခံစားရစေတယ် တံခါးပိတ်သံ ပန်းကန်ခွက်ရောက်သိမ်းဆည်းသံတွေ ငြိမ်သွားတော့မှ တင်မာဝင်းခြင်ထောင်ထဲရောက်လာတယ် ။ ။်
လီးထိပ်မှာ သားရည်နှင့်ညှစ်ယူခံရသောအရသာမျိုးခံစားနေရပြီးအိပ်မက်လိုလိုဖြစ်နေတယ် အိပ်ယာခြင်ထောင်အခင်းအာလုံးသူစိမ်းပြင်ပြင် မှိန်ဖျော့ဖျော့မီးရောင်ကလည်း မှောရုံတောထဲရောက်နေသလိုလို ငါဘယ်ရောက်နေလဲ အတော်စဉ်းစားယူလိုက်မှ ကျနော့်ကိုကျောပေး ကျနော့်လီးဆီက ထူးကဲသောအရသာပေးစွမ်းနေသူမှာ တင်မာဝင်းပဲ အိပ်မက်ထဲမှာအခါခါ မယားအဖြစ်မှန်းခဲ့ရသောတင်မာဝင်းအိပ်မက်သခင်မ အခုတော့ ကျနော့်ကို ပြုစုပေးနေရှာတယ် “”အား” လို့ကျနော့်မှာ အော်ညည်းမိလာရတယ် လီးဒစ်ကနေ အာခေါင်အဆုံးအထိ စုပ်သွင်းနေတာကိုး ကျနော်မခံစားနိုင်တော့ တင်မာဝင်းထမိန်ကိုလှန်ပြီး ကျနော့်မျက်နှာပေါ်ခွခိုင်းလိုက်တယ် အမွှေးတွေပြောင်ရှင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့သိမ်းကြုံး လှန်ယက်ပလိုက်တာ တင်မာဝင်းဆီက ညည်းသံထွက်လာတဲ့ အထိပဲ “”ကိုဇော် လိုးပါတော့” မီးရောင်ဖျော့ဖျော့မှာ ရမက်မျက်ဝန်းလေးတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ် “အင့် အမေ့ အား အ အ” ကျနော့လက်မောင်းကို အတင်းဖျစ်ညစ်ကိုင်လာတယ် အားယူပြီး တစ တစ ဖြည်းရာကနေမြန်မြန်လေးလိုးပေးလိုက်တယ် တင်မာဝင်းဘာ့ကြောင့် လင်နဲ့ခနခနကွဲရတာလဲဆိုတာလက်တွေ့သိလာရတယ် ကြွက်သိုးပြောတဲ့ မျှော့ ဆိုတာသူ့အမ တင်မာဝင်းမှာ ရှိနေတာပါပဲ
အောက်ကနေသူမက ပြန်ညှောင့်ပေးရင်း ကျနော့်လီးတံတစ်ခုလုံးကို စုပ်ဆွဲယူနေတယ် ကောင်းလိုက်တာ ကျနော်လည်း “”ကောင်းလိုက်တာမိန်းမရယ် အချစ်ရယ် “” တင်မာဝင်းဆံပင်စလေးသပ်တင်ပေးရင်း နုတ်ခမ်းလေးစုပ်ရင်း ချစ်တယ်မိန်းမရယ်လို့ပြောပြီးလိုးနေမိတယ် ဒေါ်မြင့်ကို လိုးထားတာရယ် အရက်အရှိန်ရယ်ကြောင့်သာ ခနလေးနဲ့မပြီးသွားတာ တင်မာဝင်းကအတော်နှာထန်တာပဲ ဒါ့ကြောင့်အရင်ယောက်ျားတွေ မနိုင်တော့ပဲ ကွဲကြ ကွာကြရတာ တင်မာဝင်းက အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးပြန်တယ် ဖင်ကို ရှေ့နောက်ပစ်ညှောင့်တယ် စကောဝိုင်းပုံစံလှည့်ပြီး လီးထဲလရည်ကို ညှစ်ယူတယ် မထွက်သေး အပေါ်အောက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်တယ်
“”အား အီး အား ဟင်းဟင်း အအား” ဆောင့်ရင်း ကျနော့်လည်ပင်းကိုလက်နဲ့သိုင်းဖက်ပြီး ခေါင်းက နောက်ပြန်လန်ကျမတက်ယိမ်းထိုးနေတယ် အော်ချက်ကတော့ မိုးသံလေသံကြောင့်သာ ကျနော်လည်းပြီးခြင်လာပြီ အပေါ်ကခပ်မြန်မြန်ဆင်းခိုင်း လေးဘက်ထောက်အနေအထားနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးပစ်တယ် ကျနော့်ဟာက ရှည်တယ် ခါးတိုတဲ့ တင်မာဝင်း သားအိမ်ကို ထိုးနေမိတယ် “”အား ကိုရယ် နာလိုက်တာ အား အားဆောင့် အောင့်တယ် ပြီးတော့မယ် ဆောင့် ဆောင့် “”တဲ့ ဆံပင်တွေပါနောက်ပြန်လှန်သိမ်းပြီး ဆောင့်လိုးချတာ လေထဲတောင်မြောက်တက်သွားသလားမသိ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းက ဒီနေရာမှာအသုံးဝင်လှတယ် အိပ်ယာထဲအသံစုံမြည်ပြီး ၂ယောက်သားအော်ညည်းသံနဲ့ ကျနော်လည်းတင်မာဝင်းဖင်အပေါ်ကနေဆောင့်ပြီး သားအိမ်ထဲလီးရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်မိတော့တယ် ပြီးတော့ အပေါ်ကမှီဖက်ရင်းမှိန်းနေတာ ကျနော့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခံနိုင်သဗျာ မနက်၎နာရီလောက်မှာ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတယ် တင်မာဝင်းထမိန်လှန်ပြီးကပ်တွန်းလေး လိုးပေးလိုက်တယ်
“”ကိုရယ် ဖြည်းဖြည်းနော် မိန်းမသားအိမ်တွေအောင့်နေလို့”” အာ့ဆိုမလုပ်ရတော့ဘူးလား လိုးနေတာကိုရပ်လိုက်တော့ “”လုပ်ပါ ခံနိုင်ပါတယ်” သူများကို စွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ မထားသွားနဲ့နော် ကိုဇော်ကဆရာကြီးပဲ လူပျိုမဟုတ်တော့ဘူးမလားပြော”” တင်မာ့ရှေ့မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ”” ကျနော်သူ့မျက်နှာလေးဆွဲယူပြီး နုတ်ခမ်းစုပ်ယူပစ်ပေမဲ့ ပြောကွာ သိခြင်တယ် တဲ့ “”တစ်ယောက်တည်းပါ “” ဆိုတော့ ဘယ်သူလဲ တဲ့ ပြောပြပါအတင်းလုပ်နေတယ် “”တကယ်လို့ပြောပြရင် စိတ်ထဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကတိပေးမလား “”လို့ပြန်ချုပ်တယ်
အင်း တကယ်နော် တကယ် ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး လူပျိုဘဝကို ယူသွားသူက ယောက္ခမကြီးဒေါ်မြင့်ပဲ”” “”ဟယ် မေမေ နဲ့”” “”ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးလား မိန်းမ”” မဆိုးပါဘူး တဲ့ နောက်ကနေလိုးပေးနေရင်းကို သူ့အမေနဲ့ဘယ်လိုဘယ်ပုံလိုးကြတယ်ဆိုတာက ခရေစေ့တွင်းကျ မေးနေသဗျာ ဘယ်နှစ်ခါ ဘယ်နေရာ ကအစ အဲ့လိုပြောပေးနေရင်းကို အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာပြီး တင်မာဝင်းကောင်းနေတယ် ပက်လက်ဆွဲလှန်ပြီး လီးကို အဆုံးထိ သွင်း ပြန်နုတ် အစိကို ချော်ထိုးလိုက် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးတော့ ကျနော့်ကို အတင်းဆွဲဖက်လာတယ် တင်မာဝင်းပြီးခြင်နေပြီ ခပ်သွက်သွက်လိုးပေးလိုက်တော့ မကြာဘူး အတင်းဖက်ပြီးငြိမ်ကျသွားတယ် မရဘူးလေ သူပြီးပေမဲ့ကျနော်က ဒါမျိုးကိုခြောင်းနေတာ ပေါင်နှစ်ခြောင်းကိုမ ပုခုံးပေါ်ခြေနှစ်ခြောင်းပစ်တင်ပြီး လိုးပလိုက်တယ် တကယ်ကို အော်တာဗျာ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးထပ်ဆွဲတာ တင်မာဝင်း ငိုသံပါထွက်လာတယ် ကို့နာတယ် “”အား အား ဟင့် ဟင့်တော်ပါတော့ကိုယ်ရယ် ယောက်ျားရယ်တဲ့ ဒါမျိုးဇွဲချွတ်ခြင်နေတာ တင်မာဝင်းလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေမိတယ် အော်လေ လိုးလို့ကောင်းလေပဲ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ပြန်ဆွဲလှန်ပြီး လိုးတော့မှ ပြီးခြင်လာတယ်
စောက်စိကို လက်နဲ့ဆွပေးပြီး သုတ်ရည်ကို ပန်းထည့်တော့မှ တင်မာဝင်းလည်း နောက်တချီထပ်ပြီးသွားပြန်ရှာတယ် နာကျင်မှုနဲ့ရတဲ့အရသာကို တင်မာဝင်းစွဲသွားတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိလိုက်တယ် “လူရိပ်လူခြေကြည့်အုံးကိုယ် “တဲ့ မနက်အလင်းရောင်ဝိုးတဝါးမှာ တံခါးအသာလှပ်လို့ ဖိနပ်သံမကြားအောင် လျှောက်လာခဲ့တယ် ဒေါ်မြင့်တံခါးဖွင့်သံကြားရတယ် တင်မာဝင်းလှမ်းကြည့်နေတာသိနေတော့ ခြံတံခါးအသာဖွင့် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်တာကောင်းပါတယ်လေပေါ့ တင်မာဝင်းတော့အီစိမ့်ပြီးကျန်နေခဲ့မှာသေချာတယ် လမ်းလျှောက်ရင် ထော့နဲ့ထော့နဲ့ခြေထောက်နာနေသလိုလိုနဲ့လှမ်းနေတာကို ညနေဘက်မှာ တွေ့ရတာပဲ ချစ်စဖွယ်မျက်စောင်းတွေထိုးလို့ပေါ့ ကိုယ့်ထက်အသက်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြီးပေမဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်သွားသလိုပဲ လူရှင်းလို့ ညလာခဲ့ ရမလား ဆိုတော့ နှစ်ရက်လောက်နားပါရစေအုံး တဲ့ ကျနော်လည်း ဒေါ်မြင့်တလှည့် တင်မာဝင်းတလှည့် လိုးပေးနေတာ ၂နှစ်လောက်ကြာတော့ အငယ်ဆုံးမလေးစန္ဒာနဲ့ကျနော့်ကို သဘောတူပေးစားကြတယ် ကျနော်ကလည်း ငြင်းမနေဘူး ခေါင်းညိမ့်လိုက်တယ် ဟီး ………..။။ ပြီး